September « 2020 « Online Tv Nepal
कोरोना संक्रमणका कारण प्रदेश १ मा थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबार कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्र विराटनगर र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा १–१ जनाको पुरुषको मृत्यु भएको हो । कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा उपचाररत मोरङको जहदा गाउँपालिका–६ का ६० वर्षीय पुरुषको बुधबार बिहान ४
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको आलोचनात्मक समर्थन रहनेछ । व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकै मिहिनेत गर्नुपर्ला । काममा खुट््टा तान्नेहरु सक्रिय रहनेछन् । पढाइ लेखाइमा अल्छी गर्नाले अरुभन्दा पछि परिनेछ । मायाप्रेममा अविस्वास बढ्नेछ । बुवा वा बुवासरहका मानिससँग मनमुटाव सिर्जना हुनेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला सामान्य स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्या
अस्ट्रेलिया अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई घर फर्कन सहयोग गर्दै अष्ट्रेलियन नेपाली ट्राभल ब्यबसायी !
अस्ट्रेलियामा रहेर ट्राभल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरुले नेपालीहरुको उद्दारलाई तीब्रता दिएका छन् । उनीहरुले चौथो पटक नेपाल राजदुतवाससँग समन्वय गरि सेप्टेम्बर २७ तारिखमा सिंगापुर एअरलाइन्समार्फत ५ शिशुसहित १४७ जना नेपालीलाई उद्दार गरी नेपाल पठाएका छन् । नेपाल फर्किने नागरिकहरु अस्टेलियाको विभिन्न राज्य र न्यूजल्याण्डबाट स्वदेश फर्किएका छन् । उद्दार
पहिलो भेटमै मदनकृष्णले दिए पुण्यलाई दरो दनक ! कुलमानको पक्षमा लड्न तयार छु, बर्ता बोल्दै नहिड्नुस (भिडियो सहित)https://www.youtube.com/watch?v=_ftP-Sr6SoQ&t=3s
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) पढाइ लेखाइमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ भने मिहिनेत गर्दा महत्वपूर्र्ण उपलव्धी हासिल गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको साथ तथा समर्थन रहने हुनाले पद पाप्तिको गतिलो योग रहेकोछ । नयाँ काम पाउने तथा गरीरहेको ठाउमा बढुवा हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरी मनग्गे धन तथा सम्पती कमाउन सकिनेछ ।
‘पिउदिना शराब’बोलको भिडियो द रबिना आरुष च्यानल मार्फात सार्वजनिक भएको छ। यस गितको शब्द भने यशु थापाको रहेको छ । यस गितमा स्वर निशा देशर र संगीत राज सागरको रहेको । एरेञ्ज भने साहस साख्यले गरेका छन् भिडियोलाई रबिना र आरुष चौहानले निर्देशन गरेका हुन् भने छायांकन आरुष चौहान र